भाजु ला बेइमान खनी - परिहास - नेपाल
कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले ‘भाजु ला बेइमान खनी’ के भने, त्यो भाइरलै भइदियो । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, उनको निशाना प्रधानमन्त्री केपी ओलीतिर छ । केपी ओली काठमाडौँका ज्वाइँ हुन् । ज्वाइँलाई नेवार समुदाय सम्मानपूर्वक ‘भाजु’ भनेर सम्बोधन गरिन्छ । तर प्रधानमन्त्री केपी भाजु त बेइमान भएर पो निस्के !
काठमाडौँमा यस्ता भाजुहरु धेरै छन्, जो पछि गएर बेइमान निस्के । आजभन्दा दस वर्षअघि पनि गुठीकै कुरा लिएर एउटा आन्दोलन भएको थियो । कुमारी जात्रासँग सम्बन्धित केही परम्परागत नाचलाई उपलब्ध गराउँदै आएको रकम बन्द गरेपछि त्यो विवाद आएको थियो । त्यो बन्द गराउने नेता थिए, तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई । बाबुराम पनि काठमाडौँकै एक सक्रिय भाजु हुन् । पहिले बाबुराम भाजुको पालामा गुठी आन्दोलन, अब केपी भाजुको पालामा फेरि गुठी आन्दोलन । आखिर यो ‘भाजु’ हरुकै पालामा गुठी चलाउने काम किन हुन्छ, बुझ्न नसकिँदो छ ।
अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा प्रधानमन्त्री मात्र होइन, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि काठमाडौँकै भाजु हुन् । यतिबेला उनको पनि त्यति सक्रियता देखिँदैन । अर्का भाजु कमरेड झलनाथ खनालको त झन् चाइँचुइँ पनि सुनिँदैन । उता कांग्रेसतिर पनि भाजुहरु बग्रेल्ती नै छन् । जस्तो, मनमोहन भट्टराई । ती भाजुको पनि यतिबेला आवाज निस्केको सुनिँदैन ।
यो सबै हेर्दा त यस्तो लाग्छ, काठमाडौँका कुनै एकड–दुकड मात्र होइन, पूराका पूरा भाजुहरु नै बेइमान् छन्, स्व. मनमोहन अधिकारी भाजुलाई छाडेर ।